टियुको लापरवाहीको पराकाष्टा : परिक्षा एउटा विषयको... प्रश्नपत्र अर्कै विषयको थमाएपछी इलाममा यस्तो 'बबाल' !
ARCHIVE, OFF THE BEAT » टियुको लापरवाहीको पराकाष्टा : परिक्षा एउटा विषयको... प्रश्नपत्र अर्कै विषयको थमाएपछी इलाममा यस्तो 'बबाल' !
इलाम - एउटा विषयको परिक्षा दिन गएको, प्रश्नपत्र आयो अर्कै विषयको ! यस्तो बेलामा परीक्षार्थीलाई कस्तो भयो होला ? मंगलबारको परिक्षामा इलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा परिक्षा दिंदै गरेका विद्यार्थीहरुलाई पनि त्यस्तै भयो ।
उक्त क्याम्पसमा स्नातक तह शिक्षाशास्त्र अन्तर्गतको दोश्रो बर्षको 'इन्टरनेशनल पोलिटिक्स' बिषयको परिक्षा दिन गएका विद्यार्थीहरुको हातमा 'पोलिटिक्स अफ नेपाल'को प्रश्नपत्र परेपछि विद्यार्थीहरु तनावमा परेका थिए । एउटा विषयको परिक्षामा अर्कै विषयको प्रश्नपत्र आएको भन्दै ६८ जना विद्यार्थी परिक्षा हलबाट बाहिरिएपछी परिक्षा स्थगित भएको छ । यस्तो समस्या इलाम बाहेक अन्य जिल्लामा देखिएन । टियुले पनि यस विषयमा आफ्नो आधिकारीक धारणा व्यक्त गरेको छैन ।
क्याम्पस प्रशासन भने त्रिभुवन विश्व बिद्यालयको लापरवाहीका कारण यस्तो हुन गएको तर्क गरेको छ । क्याम्पसका निमित्त प्रमुख धनबहादुर न्यौपाने भन्छन् ‘विश्व विद्यालयले ४ बर्षे शिक्षाशास्त्र स्नातक दोश्रो बर्षको पाठयक्रमको दोश्रो पटकको संसोधन क्याम्पसमा आएकोमा इन्टरनेशनल पोलिटिक्स कोड नं ४२८ भन्ने आएकाले सोही अनुसार अध्यापन गराइएको हो । परिक्षामा पोलिटिक्स अफ नेपालको प्रश्नपत्र आएपछि डिन कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर परिक्षा रोक्न लगाइएको छ ।’
हेर्नुहोस् टियुको बिजोग ! माष्टर्सको प्रश्नपत्रमा अनेकौं गल्ती ! विद्यार्थी भन्छन्, 'माष्टर्सको विद्यार्थी भन्ननै लाज भो' !
१२००० लिएर अरुको परिक्षामा सामेल ! प्रमाणसहित आरआरकि विद्यार्थी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लाखौं रुपैयाँमा यसरी बेचिँदो रहेछ प्रश्नपत्र !
टियुको परिक्षामा प्राज्ञिक अपराध, प्राध्यापक श्याम सुन्दर पन्त जसले उत्तरपुस्तिका जाँच्दै गर्दा फेसबुक लाइभ गरे !